Isku dar Google Adwords iyo Salesforce oo leh Falanqeyn Bizible | Martech Zone
Bizable wuxuu kuu ogolaanayaa inaad falanqeyso waxqabadka Adwords-kaaga oo ku saleysan beddelaad halkii aad riixi laheyd, taasoo kuu oggolaaneysa inaad si gaar ah ula shaqeyso Salesforce si loo cabbiro waxqabadka ku saleysan ololaha, kooxda xayeysiinta, xayeysiiska, iyo heerka erayga muhiimka ah. Tan iyo markii Bizable wuxuu la shaqeeyaa raadinta ololaha hadda ee Google Analytics, waxaad si fudud ula socon kartaa kanaal fara badan oo ku baahsan raadinta, bulshada, lacag bixinta, emaylka iyo ololeyaasha kale.
Astaamaha Muhiimka ah ee ku qoran barta Bizible
AdWords ROI - waxay kuu ogolaaneysaa inaad si qoto dheer ugu darsato AdWords ROI ololaha, kooxda xayeysiinta, waxyaabaha ku jira xayeysiiska, iyo heerka erayga muhiimka ah, si aad u cabbiri karto oo aad u gaari karto go'aannada ugu habboon ee raadinta ku saleysan dakhliga.
Raadinta Multi-Channel - wuxuu si toos ah u soo tebiyaa xuduudaha Google Analytics UTMs ee Salesforce, taas oo ka dhigaysa qiimeynta iyo wax ka beddelka olole kasta oo suuqgeyn toos ah ee ROI ah mid fudud
Faahfaahin Taariikhda Hogaaminta - Ku hubee kooxdaada iibka macluumaadka suuqgeynta ay u baahan yihiin si loo xiro fursado badan. Eeg sida hoggaamiyeyaashaadu ula falgaleen bartaada kahor intaysan beddelmin, oo lagu daray dhammaan macluumaadka suuqgeynta la xiriira.
Warbixinnada Gaarka ah - Suuqgeynta khadka tooska ah ayaa sii adkaaneeysa oo kala daadsan. Dhis warbixinno saamayn leh oo wax ku ool ah, oo lagu daray warbixinno caadiya oo aan xad lahayn oo ku habboon ganacsigaaga.
Is-dhexgallo badan - Laga soo bilaabo cusbooneysiinta degdegga ah ee Salesforce illaa suuq-geynta suuq-geynta, nidaamyada maareynta maaddooyinka iyo xitaa Optimizely for A / B Test. 60% ka mid ah Bizable macaamiisha sidoo kale waxay isticmaalaan Marketo, Hubspot, Act-On, ama Eloqua. Bizible sidoo kale wuxuu leeyahay hal-gujis rakibid ah WordPress, Joomla, ama Drupal.
Waxaad ka heli kartaa Bizible ee Saleforce AppExchange.
Tags: imtixaanka abAct-Onisweydaarsigamacquul ahnidaamyada maareynta contentdrupalcodkarnimogoogle adwordshubsashoJoomlasuuq-geynta suuqasuuqougu habbooniibiniibinta iibsigaiibka ppcWordPress